Ndeipi Inonyanya Kuenzanisa Injini Yekutenga? | Martech Zone
China, June 14, 2012 China, June 14, 2012 Andrew Davis
CPC Strategic yakanyorwa data kubva kune vanopfuura zana vatengesi vepamhepo vehukuru hwakasiyana, angangoita mamirioni 100 emamiriyoni uye mamirioni masere mumari kuti vaone akanakisa ekuenzanisa enjini dzekutsvaga pamhepo.
Kuenzanisa injini dzekutengesa dzinosanganisira mawebhusaiti senge Pricegrabber, Nextag, Amazon Chigadzirwa Ads, Shopping.com, Shopzilla neGoogle Shopping.
Muchidzidzo tinoongorora nzvimbo dzakanakisisa dzekutengesa eecommerce mutengesi traffic, mari, shanduko, mutengo wekutengesa, uye mutengo pamitero yekudzvanya, uye uzere iwo kuti vaone inorema uremu shasha CSE.
Pazasi pane pfupiso pfupi yeYakanakisa Kuenzanisa Shopping Sites Ripoti muna 2012:
Wepamusoro 10 CSEs 2012
# 1: Google Chigadzirwa Kutsvaga (Munguva pfupi ichave Kutenga neGoogle - KURIPWA - rumwe ruzivo pane izvo pano)*
Google Shopping ndiyo inotonga pamusoro CSE yezvose zviri Q1 2011 uye Q1 2012, uye yanga iri kwenguva yakati. Kunyangwe Shopzilla yakarova Google ye traffic yakazara muna 2011, uye maAmazon Product Ads akaburitsa nzira yayo kuenda kunzvimbo yepamusoro yegore ra2012, Google inogara ichigadzira huwandu hwakawanda hwemotokari, uye inotongwa munzvimbo mbiri dzemari yese.
Nextag yakaunza kumba nzvimbo yechipiri yeiyo yakazara CSE mhando yegore rechipiri rakateedzana uye yakachengetedza nzvimbo yepamusoro pakati penzvimbo dzekuenzanisira dzakabhadharwa nzvimbo dzegore ra2012. Nepo traffic yakazara yaNextag yakadzikira kubva pagore rapfuura, ichiri chechipiri chikuru injini yekutyaira injini ( mushure meGoogle), kune ese ari maviri ma2011 na2012. Nextag yakagadziriswazve zvakanyanya maererano neshanduko uye mutengo pakuki (CPC) mitengo yegore ra2012.
# 3: Mutengesi wemutengo
Nepo Shopzilla yakatora chinzvimbo chepamusoro cheinjini chegore ra2011, Pricegrabber yakaburitsa injini muQ1 2012. Kunyangwe mitengo yeCustomgrabber yeCOS neCPC yakadzikira, traffic nemitero zvakaramba zvakaenzana kumativi ese ari maviri.
Wepamusoro Shanduko Sites
# 1: Google Chigadzirwa Kutsvaga
Google Chigadzirwa Kutsvaga yaive yechipiri yepamusoro mota inogadzira injini yegore ra2012, uye sosi hombe yemari yevatengesi. Nekudaro, kune ese ari maviri ma2011 na2012, Google yakatora kumba goridhe reKushandura Rate mumatanho edu.
Kurudyi kuseri kweGoogle mumari, Nextag ndiyo yechipiri injini yekushandura yevatengesi muna2012.
Kunyangwe iri injini diki, Pronto inorongedza yakasimba punch yekushandura kwevatengesi, ichikomberedza mainjini matatu ekutanga ekushandura mwero.
Yakanakisa Mari Yekutengesa (COS) Sites
# 1: Mutengesi wemutengo
Kutevera maCSE emahara, Pricegrabber yakawana iyo yepamusoro nzvimbo yeinjini yepamusoro mumutengo wekutengesa (COS) chikamu. Iri zvakare pakati peinjini dzakadzikira muCOS yakazara kubva muna2011 kusvika 2012.
Kunyangwe Nextag's COS ichinyanya kuwedzerwa yegore ra2012, ichiri chechipiri sarudzo yakanakisa yeinjini dzekutenga dzeCOS.
Kutenderedza kunze kweiyo rondedzero, Shopping.com yakarova maAmazon Product Ads kune echitatu engina COS engines.
Movers uye Shakers zve2012
Shopping.com yakakwenya nzira kusvika kune yechina mainjini chinzvimbo chinzvimbo chegore ra2012, yaimbove yauya muna6.
Pronto yakabva kwekupedzisira muzvikamu zvese kusvika kunzvimbo yechinomwe yegore ra7.
Injini Inotarisa: Amazon Chigadzirwa Ads
Amazon Chigadzirwa Ads ndeimwe yenyowani dzeCSEs ipapo uye inoonekwa kukura kwakanyanya mumakore apfuura. Q1 2012 yakaona kuwanda kwakakura kwetraffic kweAmazon Chigadzirwa Ads, uye zvakare bump mune mari. Kunyangwe chiyero chekushandurwa kweAmazon Chigadzirwa Ads chakadzikira kubva kuQ1 2011 kuenda kuQ1 2012, kuwanda kwevatengesi kunongedzera pachirongwa, kuwedzera kukwikwidzana nemumwe ndiko kungangoita chikonzero chekudzikira kweshanduko.
* Google Product Search ichave yeGoogle Shopping muna Gumiguru, dzidza kugadzirira pano.
Dzvanya chinotevera chinongedzo kuti utarise chidzidzo chakazara pane iyo akanakisa kuenzanisa nzvimbo dzekutenga.
Ndezvipi zvikonzero zvakakonzera kudonha kwe shopzilla?
Sep 28, 2014 na4: 11 PM
Zvingave zvakanaka kana iwe ukanyora yakafanana chinyorwa nezve nyowani kumusoro uye kuuya Kuenzanisa Tsvaga Enginjini. Maviri andinoshandisa nguva dzose ari http://www.slycut.com uye http://www.price zombie.com uye ivo vanopa zvakachipa madhiri kana zvimwe zvinonakidza mhedzisiro izvo zvechinyakare zvekutengesa izvo.